Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị otu ndu ọhụrụ nke Aprecia kwupụtara
Kyle Smith ka abụrụla onye isi na onye isi ọrụ nke Aprecia Pharmaceuticals LLC, dị irè ozugbo. Maazị Smith bụ onye agha afọ 10 na Aprecia ma bụrụkwa onye osote onye isi oche nke Ọrụ maka afọ 3 gara aga. Dịka Onye isi ala na onye isi ọrụ, Maazị Smith ga-ahụ maka iduzi ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị.
Aprecia emeela ka ndị otu ndị isi ya sie ike site n'ịkwalite Patrick Staudt ka ọ bụrụ onye isi oche nke Ọrụ, dị irè ozugbo. Onye agha afọ 14 nke Aprecia, Mr. Staudt eduzila East Windsor, NJ nrụpụta ọrụ maka ihe karịrị afọ 10 ma gosipụta talent na ahụmahụ iji duga atụmanya na-atụ anya, na-abawanye ụba site na nhazi teknụzụ dị iche iche.
Maazị Smith na Maazị Staudt abụrụla isi nkuku nke Aprecia akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ na imepụta ihe ọhụrụ. Ha abụrụla ndị nyere aka n'ịmepụta ụlọ ọrụ dịka onye ndu na mmepe na imepụta ngwaahịa ọgwụ site na 3D-Printing. Ahụmahụ ha na Aprecia enyerela aka ịmepụta omenala ụlọ ọrụ na mmepụta ihe mmepụta ọgwụ 3DP, na onyinye ha emepụtala ume nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na mmekorita dị mkpa na ngwaahịa ọhụrụ.
"Ka nyiwe teknụzụ Aprecia na-agbasawanye yana mmekorita ụlọ ọrụ na-aga n'ihu, Aprecia chọrọ ikike na akụrụngwa ndị ọzọ iji gboo mkpa ndị a na-eto eto," Chris Gilmore, Onye isi ndị isi Aprecia kwuru. "Anyị nwere obi ụtọ inwe ndị ọkachamara nkà na ụzụ na ndị isi ụlọ ọrụ iji kwalite ma duzie ọganihu nhazi nke ọma n'ọdịnihu."
Maazị Kyle Smith nwere nzere Master of Business Administration na Mahadum Miami, yana nzere bachelọ sayensị na Chemical Engineering sitere na Georgia Institute of Technology.
Mazị Patrick Staudt nwere nzere bachelọ nke sayensị na Biomedical/Medical Engineering na Mahadum Drexel.
NASA na-achọ ndị isi ụgbọ elu maka ụgbọ elu mmadụ ọhụrụ…
Ihe iyi egwu ahụike ka ukwuu karịa COVID-19 na-apụta?
Mmachibido njem njem US ọhụrụ n'ihi Omicron…
Ndị otu UNWTO Executive Council na-akọwapụta: Akwụkwọ ozi ọhụrụ…
Fraport na TAV meriri obi ụtọ maka ọdụ ụgbọ elu Antalya ọhụrụ ...